Spoken English Patterns (1) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Literature/Books » Spoken English Patterns (1)
Spoken English Patterns (1)
Posted by TTNU on Aug 27, 2011 in Literature/Books |7comments
Sound Patterns တွေနဲ့ နှိပ်စက်ပြီ:လို့ Spoken English Patterns ဆက်ရေးပါမယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ် ဒါတွေကို ဖြန့်ပြီးသားပါ။ စာအုပ် (3) ထုတ်ဖို့ အားယူရင်း ပျင်းနေပါတယ်။ Mandalay Gazette Blog ဖတ်သူများ ထဲက တစ်ချို့  လည်း ဖတ်ဖူးကြမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ မဖတ်ရသေးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်တာပါ။ ကိုယ်ရေးပြီး စာအုပ်ထုတ်ပြီး မှာ Drills 200 ထိပဲ ထုတ်ထားပါတယ်။ အခု ရေးလိုက်တဲ့ (၁) ဟာ Drill (201) ပါ။ ဒီ ဘလော့ ထဲမှာတော့ (၁) အနေနဲ့ စရေးပါမယ်။ အသစ်ထပ်ရေးတာ လေးတွေလည်း အဆင်ပြေသလို ၊ အားရင် အားသလို ရေးသွားပါမယ်။
Pattern (1) You should makeapoint of + Ving.
ဒီလိုလုပ်ခြင်းကို မင်း မပျက် မကွက် လုပ်သင့်တယ်။
E.g. Buy suitable clothes. သင့်တော်တဲ့ အဝတ်အစားတွေဝယ်တယ်။
You should makeapoint of buying suitable clothes.
သင့်တော်တဲ့ အဝတ်အစားတွေဝယ် တဲ့ ကိစ္စ မင်း မပျက် မကွက် လုပ်သင့်တယ်။
(1) Leave earlier than usual.
You should makeapoint of…………………………………….
(2) Persuade him to do it.
သူ့ကို ဒါလုပ်ဖို့ စည်းရုံးတယ်။
(3) Recheck the locked doors.
သော့ခတ်ထားတဲ့ တံခါးတွေ ကို ထပ်စစ်တယ်။
(4) Return the dictionary to the library.
စာကြည့်တိုက်ကို အဘိဓါန် စာအုပ်ပြန်ပို့တယ်။
(5) Ask for permission to play in their garden.
သူတို့ခြံထဲမှာ ကစားခွင့်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းတယ်။
(6) Say goodbye to your teacher before you go home.
အိမ်မပြန်ခင် ဆရာမကို နုတ်ဆက်တယ်။
(7) Read the weather report.
မိုးလေဝသ သတင်း ဖတ်တယ်။
(8) Buy your motherabirthday present.
မင်းအမေကို မွေးနေ့လက်ဆောင် ဝယ်ပေးတယ်။
(9) Address this envelope in English.
ဒီစာအိပ် ပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်လို လိပ်စာတပ်တယ်။
(10) Throw the rubbish into the waste-basket.
You should makeapoint of……………………………………
I have already read your book one and two. They were publishedafew years ago, yeh? They were of really valuable tool for me to improve my English as well as mine. I have been expecting such books and more to come from you I suppose. So do I have to expect Spoken English Patterns2and more? Your previous books have been published by ကောင်းသန့်စာပေ if I am not mistaken.I would also like to encourage those readers of The Mandalay Gazette to wait and learn her lessons. Welcome!!! And thank u indeed.
should makeapoint of အစား should v သုံးတာ ပိုယဉ်ကျေး formal ပိုကျ၊ ခိုင်းတဲ့သဘောမဆန်ဘူးလို့လား။ အပြင်မှာ အဲဒီလို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး သုံးတာသတိမပြုမိလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သိခွင့်ရတဲ့အတွက်..။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ( ကြောင်ကြီးရေ ) ။ should v သုံးတာ Polite suggestion ဖြစ်ပါတယ်၊ ( ကြောင်ကြီး) ပြောသလိုပါပဲ ၊ ဟုတ်ပါတယ် အပြင်မှာ ဒီလို ရှည် ရှည်ဝေးဝေး သိပ် မသုံးလေ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Debate လိုမျိုးတွေမှာ ကျတော့ စကားအလှလဲသုံး ချင်တယ်၊ ထိလဲ ထိရောက်ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီလို Indirectness တွေ သုံးတဲ့ သဘောပါ။
ဥပမာ You should invite Kyaung Gyi to your party. ( ကြောင်ကြီးကို ပါတီ ဖိတ်သင့်တယ်။)
You should makeapoint of inviting Kyaung Gyi to your party. (ကြောင်ကြီးကို ပါတီဖိတ်ဖို့
Stress of meaning နည်းနည်းကွာတာသိသာမယ်ထင်ပါတယ် ( ကို ကြောင်ကြီးရေ)
Anyways, thanksalot for dropping some lines for me.
Thank you TTNU. It’s valuable for us to know. I like diplomatic speaking and writing very much.. Could u pls tell me that kind of book that u have already published???
(Chaw Chaw ရေ)
Spoken English Patterns ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ပဲ ထွက်တာပါကွယ်။ (စာရေးသူ ဒေါ်သန်းသန်းနု M.A (U.K) )
ဆိုပြီး Book(1) နဲ့ Book(2) နှစ်အုပ် ကောင်းသန့် စာပေကထုတ်ပါတယ်။ အခု Blog မှာရေးတာက Book(3) နဲ့ ထွက်မယ်ပြင်ထားတဲ့ စာမူတစ်ချို့ ပါ။ Chaw Chaw ရေ တစ်ချို့  အသုံး အနှုံးတွေ ကတော့ Diplomatic တွေ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ Level မျိုးစုံ သုံးလို့ ရအောင် ဆိုပြီး ရောထားတာပါကွယ်။
ုပို့စ်တင်တာကော မန်းတာပါ အကျိုးရှိတာတွေသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ပါ
ဒီလို သင်ကြားပေးမယ့် ဒေါ်သန်းသန်းနု ရောက်ရှိလာတာ
အားလုံးအတွက် မင်္ဂလာပါ ပဲ ။
အနော် က တော့
ဘလုတ်ကင်း လောက် တတ်သာမို့ 
ဒေါ်သန်းသန်းနု ရဲ့ 
ပို့ စ်တွေ ကို အမြဲ ဖတ်ရှု သွားချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ